क्यान्सरमा प्राकृतिक चिकित्सा र योग
फागुन ११, २०७४ शनिवार ०३:३८:३६
गर्भधारण अगाडि पति–पत्नीले के गर्ने, के नगर्ने ?
फागुन ११, २०७४ शुक्रवार १४:३३:३८
डाक्टरले अब अाफ्नै टाउको जोगाउने कि उपचार गर्ने ?
फागुन १०, २०७४ बिहिवार १८:४९:००
नेपालमा धेरैपटक प्रजातन्त्र आयो । २००७, २०४६ हुँदैं २०६२–६३ सम्म आइपुग्दा त सयौं वर्षदेखिको राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र नै आयो । तर २०७४ फागुन ७ गते मुलुकले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा चिकित्सा जगतका लागि एउटा दुःखद, मर्माहत र कहालीलाग्दो घटना भयो । प्रजातन्त्रले सर्वस...
थाइराइडमा दाग नदेखिने गरी शल्यक्रिया
फागुन १०, २०७४ बिहिवार १३:५१:००
थाइराइड र गलगाँडको शल्यक्रियाका क्रममा धेरै बिरामी २० देखि ४० वर्षका महिला नै भेटिएका छन् । घाँटीको गलगाँड नदेखिए हुन्थ्यो भने अधिकांशको चाहना हुन्छ । त्यसलाई हटाउने भनेको शल्यक्रिया नै हो । शल्यक्रियापछि दाग बस्ने अर्को समस्या थियो । तर, अब त्यो समस्याको पनि समाधान आएक...
प्रदेशमा पनि चाहिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय
फागुन ९, २०७४ बुधवार १७:३४:०५
देश संघीयतामा गएपछि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहअन्तर्गत गएका छन् । त्यसअन्तर्गत स्थानीय तहले नै स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाबाट स्थानीय तहमा बजेट गएका छन् । तर अन्य महाशाखाको जस्तो व्यवस्थापन महाशाखाबाट त्यति ध...
मानिसमा पहिलोपल्ट नयाँ बर्ड फ्लु, सचेतना कति?
फागुन ९, २०७४ बुधवार १६:१०:०५
गएको डिसेम्बरमा पहिलोपल्ट मानिसमा नयाँ बर्ड फ्लु भाइरस देखापरेको सार्वजनिक भएको छ। छिमेकी देश चीनमा विश्वमै पहिलोपल्ट देखापरेको इन्फ्लुएन्जा भाइरस A (H7N4 ) जियान्सु प्रोभिन्स निवासी ६८ वर्षीया महिलामा देखापरेको हो। झन्डै एक महिनाको उपचारपछि उनी घर फर्किएको च...
आफ्नै जीवन कसरी बचाउने? (मुक्तक)
फागुन ८, २०७४ मगलवार १७:१८:४५
बिरामीको गालीलाई कसरी पचाउने सोच्न पर्छ। कुटाइ खाए, आफूलाई कहाँ जँचाउने सोच्न पर्छ। कति जीवन बचाउने सपना बोकेर डाक्टर पढें, अहिले त आफ्नै जीवन कसरी बचाउने सोच्न पर्छ। ००० धेरै लगानी र न्यून पारिश्रमिक, असन्तुष्टि पाइएकै छ। गाली त दिनहुँ, कुटाइ चा...
डोटीमा पिटिएका डाक्टर भन्छन्– पुलिस नआइपुगेको भए सायद मेरो ज्यान जान्थ्यो
फागुन ७, २०७४ मगलवार ००:५३:००
फागुन ६ गते डोटी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा जितेन्द्र सिहंमाथि हातपात भएको छ। के कारणले भयो डा सिंहमाथि हातपात ? उनले घटनाबारे स्वास्थ्यखबरलाई यसरी बताएः म डोटी जिल्लाको केदार अखडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी दरबन्दीमा मेडिकल अधिकृतका रुपमा कार्यरत छु। जिल्ला...
स्पा के हो ? शरीरबाट कसरी निकाल्छ विषक्त पदार्थ ?
फागुन ७, २०७४ सोमवार १६:१९:००
बारम्बार ढोकामा ताल्चा लगाउन बिर्सें जस्तो लाग्ने रोग
फागुन ७, २०७४ सोमवार ११:४७:००
फागुन ५, २०७४ आइतवार ०१:०९:००
मेरो बुवा स्व. फत्तेजंग शाह र मुमा स्व. बालदिव्येश्वरी शाहज्यूले बि.सं. २०४३ सालमा आफू बसेकै घरजग्गाको दानबाट फत्तेबाल आँखा अस्पताल स्थापना भएको हो । फुल्टेक्रा नेपालगञ्जमा रहेको यस अस्पतालको म बिगत ३१ वर्षदेखि संरक्षक रही आएको छु । हाल म ९३ वर्षको भएँ । म ९३ वर्षको भएत...
वृद्धावस्थामा फिजियोथेरापी : किन गर्ने, कसरी गर्ने ?
फागुन ५, २०७४ आइतवार ०१:०७:३८
वृद्धावस्थासँगै शरीरमा विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने त्यस्ता समस्याबाट पीडित बिरामीलाई भौतिक चिकित्सा तथा शारीरिक पुनःस्थापना विधिबाट गरिने उपचार नै जेरियाट्रिक फिजियोथेरापी हो। वृद्धावस्थामा नसा, मांसपेशी, हाडजोर्नी लगायत शरीरका विभिन्न अंगमा ...
फागुन २, २०७४ बुधवार २०:४७:००
प्रिय एनएमए, लेख्न त तिमीलाई गोप्य रुपमा प्रेमपत्र नै पठाउन मन थियो। तर, खै यो एकोहोरो प्रेमले निकै पिरोल्दो रहेछ। जब-जब 'पत्र'मा तिम्रा लागि 'प्रेम' भर्ने प्रयास गर्छु, तब-तब पुराना आशाहरु छिया-छिया हुन्छन् र यही पत्रसँगै जलाउन खोज्छन् मलाई पनि। त्यसै...
फागुन १, २०७४ मगलवार १६:४४:००
प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका निम्ति गरेको लामो आन्दोलनमा निरन्तर निस्कने शब्द हो– मेडिकल माफिया । इटालीबाट सापटी लिएर बाँकी विश्वले प्रयोग गर्न थालेको ‘माफिया’ शब्दलाई डा. केसीले नेपालीकरण गरे । यसले निजी मेडिकल कलेजका सन्चालक मात्...
माघ २९, २०७४ सोमवार १९:०८:००
नेपालको संविधानले आकस्मिक सेवा र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रसूति सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गर्दै निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैअनुसार परिवार स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशा...
माघ २९, २०७४ सोमवार १२:०९:००
डा दिवाकर शर्मा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र नेपालीको बढ्दै गएको आयस्रोतका कारण जीवनशैलीमा पनि अस्वभाविक परिवर्तन आइरहेको छ । जसका कारण ग्रामीण भेगका मानिस सदरमुकाममा आएर बस्ने वा अन्य सहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम जारी छ ।...
माघ २४, २०७४ बुधवार २१:४८:५३
'एक प्रदेश : एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान'को अवधारणामा नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा, जनशक्ति तथा आफू मातहतका कार्यक्रमको लगत राख्नसमेत नसकेको आरोप लाग्ने गरेको बेला हामीकहाँ संघीयताको अभ्यास तीव्र रुपमा भइरहेको छ। कुनै पनि सर...
माघ २४, २०७४ बुधवार १९:१०:००
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने ४३ जनाको नाम सार्वजनिक गर्‍यो। आयोगले जाँचबुझका क्रममा उनीहरुलाई दोषी फेला पार्दै सरकारी सेवामा नियुक्ति नगर्नेदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनेसम्म...
यसरी बन्छ गुणस्तरीय औषधि
माघ २३, २०७४ मगलवार १३:१४:००
औषधिमा केही समस्या छ, मापदण्ड तथा गुणस्तर अनुसार छैन भने त्यसले बिरामीलाई थप असर गर्न सक्छ । त्यसैले औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन । औषधिको गुणस्तर भन्ने बित्तिकै ४–५ वटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो त, औषधि जुन रोग निवारणका लागि बनाइएको हो त्यसको न...
सोभियत संघमा बिरामी हुँदा : 'समाजवादी अस्पताल'को शय्यामा केही दिन
माघ २०, २०७४ शनिवार १३:४४:००
सन् १९८० को सोभियत संघ। बाटोमा हिउँ खसिरहँदा हावाको वेग पनि मुटु कमाउने थियो। म चिसोको सामना गर्दै हिँडिरहेको थिएँ। केही दिनयता स्वास्थ्य केही बिग्रिँदै गएको थियो। पढाइको व्यस्तताका कारण स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सकेको थिइनँ। चिसोले समातेछ। टाउको, घाँटी र छाती दुख्न...